Imifanekiso kaCharles Manson kunye noMonkey Family
Ngo-1969 uCharlie Manson waphuma esitokisini lakhe esitratweni saseHaight-Ashbury kwaye kungekudala waba yinkokheli yabalandeli abazaziwa ngokuba yiNtsapho. Nantsi igalari yezithombe ezininzi zamalungu omndeni kaManson aneenkcazo ezimfutshane zendima zabo njengabalandeli bakaManson.
Ngo-1969 uCharlie Manson waphuma esitokisini lakhe esitratweni saseHaight-Ashbury kwaye kungekudala waba yinkokheli yabalandeli abazaziwa ngokuba yiNtsapho. UManson wayefuna ukungena kumashishini omculo, kodwa xa oko kwaphulukana nobuntu bakhe bobugebengu kwavela kwaye yena kunye nabanye abalandeli bakhe bathatha inxaxheba ekuhlaselweni nasekubulaweni. Okubaluleke kakhulu ukubulala umdlali we-actress uSharon Tate owayeneenyanga ezisibhozo ezikhulelweyo kunye nabanye abane ekhaya lakhe, kunye nokubulawa kukaLeon kunye neRosemary LaBianca.
UCharles Manson (2). Mugshot
Ngo-Oktobha 10, 1969, iBarker Ranch yahlaselwa emva kokuba uphenyo ubone iimoto ezibiwe kuloo ndawo waza wafumana ubungqina bokushushumbisa uManson. UManson wayengazange azungeze ngexesha lodidi lokuqala lweentsapho, kodwa wabuyela ngo-Oktobha 12 waza wabanjwa namanye amalungu angamalungu omndeni. Xa kufika uMaphoyisa uManson efihliweyo phantsi kwekhabhinethi encinci, kodwa wakhawuleza wafumanisa.
Ngomhla ka-Agasti 16, 1969, uManson kunye neNtsapho baqulunqwe ngamapolisa kwaye bathathwa ngokungathandabuzeki kwebabi bemoto (kungekhona umrhumo ongaqhelekanga kuManson). Isigunyaziso sokukhangela siphelelwa ngumsebenzi ongafanelekanga ngenxa yephutha lomhla kwaye iqela likhishwe.
UManson wayethunyelwe kuqala ejele laseSan Quentin, kodwa wathunyelwa eCavaville waya kwiFolsom waza wabuyela eSan Quentin ngenxa yokuphikisana kwakhe kwamagosa asejele kunye namanye amabanjwa. Ngo-1989 wathunyelwa ejele lase-Corcoran State State apho ehleli khona ngoku. Ngenxa yeziphene ezahlukahlukeneyo entolongweni, uManson uye wachitha ixesha elininzi phantsi kohlwayiso (okanye njengabakhweli bakubiza ngokuthi, "umgodi"), apho wayegcinwa yedwa kwimizuzu engama-23 ngemini kwaye wagcinwa isigxina xa ehamba ngaphakathi kwiintolongo.
UManson wayephikisiwe ngamaxesha angama-10, waza wafa ngoNovemba 2017.
UBobby Beausoleil. Mugshot
UBobby Beausoleil ufumana isigwebo sokufa ngenxa yokubulala uGary Hinman ngo-Agasti 7, 1969. Kamva isigwebo sakhe saguqulelwa ebomini entolongweni ngowe-1972, xa iCalifornia yayigxeka isigwebo sokufa. Okwangoku e-Oregon State Penitentiary.
UBruce Davis. Mugshot
UDavis ubenecala lokubulala ngenxa yokuthatha inxaxheba ekubulaleni kukaGary Hinman kunye ne-Spahn's Ranch ngesandla, uDonald "Ufutshane" uShea. Okwangoku e-California Men's Colony e-San Luis Obispo, eCalifornia kwaye uye waba ngumKristu ozelwe ngokutsha iminyaka emininzi.
Catherine Yabelana ngeGypsy
Ujoyine uManson Family ngo-1968 Catherine Yabelana ngeGypsy. Mugshot
UCatherine wabelelwa eParis, eFransi ngoDisemba 10, 1942. Abazali bakhe babeyingxenye yentshukumo yokulwa neNazi ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. UCatherine wathunyelwa kwikhaya lezintandane emva kokuba abazali bakhe bezemvelo bazibulale ngenxa yokungahloneli umbuso wamaNazi. Wayekwamukelwa eneminyaka elisibhozo ngumfazi waseMelika.
Kwiminyaka elandelayo isabelo sabomi sasiyinto eqhelekileyo ukuba unina, ebenomdlavuza, azibulale, eshiya isabelo sokunyamekela uyise ongaboniyo. Wadibana neembopheleleko zakhe kwaze kwaba yilapho ephinde watshata waza wabuya ekhaya, waphuma ekholejini, watshata, waqhawula waza waqala ukuzulazula ngeenxa zonke eCalifornia.
Catherine Yabelana ngeGypsy. Mugshot
UCatherine "Gypsy" Yabelana kwakuyi-violinist ephumelele eyaphuma kwiikholeji nje kufutshane nokufumana iidanga zomculo. Wadibana noManson ngoBobby Beausoleil waza wajoyina intsapho ehlobo le-1968. Ukuzinikela kwakhe kuManson kwakusondeleyo kwaye indima yakhe yayinjengomqeshi kwabanye ukuba bajoyine iNtsapho.
Ngethuba lokulwa kwetate lokubulala, uGypsy wangqina ukuba uLinda Kasabian wayeyindoda yokubulala kungekhona uCharles Manson. Ngowe-1994 wabhala ingxelo yakhe, esithi uthe wanyanzeliswa ukuba azimangele emva kokuba amalungu omndeni amdonsa emva kweloli, esongela ukuba wayengangqinanga njengoko aqondisa.
Ngowe-1971, emva kweenyanga ezisibhozo emva kokuzala kwakhe kunye nendodana kaSteven Grogan, yena kunye namanye amalungu eNtsapho abanjwe emva kokuthatha inxaxheba ekubanjeni ngamapolisa ngexesha lokuphanga kwi-store gun. Abelana nabo babetyala kwaye bachitha iminyaka emihlanu kwi-California Institute for Women in Corona.
Ngoku uhlala eTexas kunye nomyeni wakhe wesithathu kwaye kuthiwa ungumKristu ozelwe ngokutsha.
Ukhutshwe kwiNtsapho uSherry Cooper. Mugshot
USherry Cooper noBarbara Hoyt babaleka eManson kunye nosapho emva koHoyt beva uSusan Atkins ethetha ngoTate ukubulala uRuth Ann Morehouse. Xa uManson efumene ukuba loo mantombazana amabini wayebalekile, uchazwa njengomsindo kwaye wabuya emva kwabo. Wabafumana besidla isidlo sakusihlwa waza wabanika i-$ 20 emva kokuba amantombazana athi kuManson bafuna ukuhamba. Kukho iindumnqa ukuba kamva wayala amalungu omndeni ukuba ahambe nawo aze abuyise okanye abule.
Ngomhla kaNovemba 16, 1969 umzimba ongaziwa wafunyanwa owagqalwa kamva njengelungu lentsapho, uSherry Cooper.
aka Little Patty noLinda Baldwin Madaline Joan Cottage. Mugshot
UMadaline uJoan Cottage, aka Little Little kunye noLinda Baldwin, wajoyina uMonkey Family xa eneminyaka engama-23 ubudala. Akukho nto ibhaliweyo ukuba ibonise ukuba yingxenye yewebhu yaseManson efana neKasabian, Fromme kunye nabanye, nangona kunjalo ngoNovemba 5, 1969 wayene "Zero" xa ecelwa ukuba adubule emdlalweni weRussia roulette. Wafumanisa ezinye kwiNtsapho xa abanye bangena egumbini emva kokubhunqa, babika impendulo yakhe ekufeni kukaZero, "UZero wadubula ngokwakhe, njengamabhayisikobho!" I-Cottage yashiya intsapho kungekudala emva kwesiganeko sokudubula.
Sn Snake Dianne Lake aka Snake. Mugshot
UDianne Lake yiyodwa yeentlekele zakuqala-1960. Wazalelwa ekuqaleni kwe-50s kwaye wahlala kakhulu ebuntwaneni bakhe kwiCommunity Wavy Gravy Hog Farm kunye nabazali bakhe be-hippie. Ngaphambi kokujika kwe-13, wayenxaxheba kwiqela lesini kunye nokusetyenziswa kweziyobisi kuquka i-LSD. Xa eneminyaka eyi-14, wadibana namalungu omndeni waseManson xa e tyelela indlu ababehlala kwiTopanga Canyon. Ngokuvunyelwa ngumzali wakhe, washiya iHog Farm waza wajoyina iqela leManson.
UManson wambiza iNyoka kunye nokusebenzisa isizathu sokuba afune ubaba, wayembetha ngokuphindaphindiweyo kwamanye amalungu entsapho. Amava akhe kunye nentsapho aquka ukuthatha inxaxheba rhoqo kwiqela lesini, ukusetyenziswa kweziyobisi nokuphulaphula izilungiso eziqhubekayo zikaManson malunga noHelter Skelter kunye ne "Revolution."
Ngethuba lokuhlaselwa kwe-Spahn Ranch ngomhla ka-Agasti 16, 1969, uLake kunye noThanson bawunqanda ukuboshwa beyeke iintsuku ngaphambi kwe-Olancha. Ngethuba, uWatson watshela iLake ukuba wabulala uSharon Tate, phantsi kwemiyalelo kaManson, waza wachaza ukubulawa "njengolonwabo."
ILake lalithe cwaka malunga nokuvuma kukaWatson nangemva kokuxininiswa kakhulu emva kokubanjwa kwakhe eBarker Ranch ngo-Oktobha 1969. Waqhubeka ethulisa kwaze kwaba yilapho uJack Gardiner, igosa lamapolisa laseInyo County, nomfazi wakhe bangene ebomini bakhe baza bamnika ubungqina kunye noqeqesho lwabazali .
Ekupheleni kukaDisemba, iLake yabonakalisa i-DA into ayayiyazi malunga nokubandakanya koNtsapho kwi-Tate neLaBianca. Ingcaciso ibonakalise ibaluleke kakhulu kumshushiso kuba uWatson, uKrenwinkel kunye noVanes Houten babethetha ngokuzibandakanya kwabo ekubulaweni kwiLake.
Xa wayeneminyaka eyi-16, iLake yahlushwa yi-LSD kunye ne-LSD kwaye yathunyelwa kwisibhedlele sasePatton State ukuba ifumane unyango lwe-schizophrenia yokuziphatha. Wakhishwa emva kweenyanga ezintandathu waza wahlala noJack Gardiner kunye nomfazi wakhe, owaye waba ngabazali bakhe abangabantwana. Ngoncedo lobuchule olwamkelayo kunye nokukhuthazwa kweGardiners, uLwandle oluphumelele kwisikolo esiphakamileyo kwiikholeji kwaye kuthiwa uphila ubomi obonwabileyo njengomfazi nonina.
aka Yellerstone uEla Jo Bailey aka Yellerstone. Mugshot
Ngo-1967 u-Ella Jo Bailey noSusan Atkins babehlala kwidolophu yaseSan Francisco. Kwakukho apho badibana noManson baza banquma ukushiya umasipala kwaye bajoyine uManson Family. Ngaloo nyaka wajikeleza ngasentshona-ntshona noManson, uMary Brunner, uPatricia Krenwinkel noLynne Fromme, de bafudukela kwi-Spahn Ranch ngo-1968.
Akukho nto ebhaliweyo malunga neBaley, ngaphandle kwaBaley kunye noPatricia Krenwinkel ababethelela eMalibu, eCalifornia xa bethathwa yiBless Boys 'uDennis Wilson. Le ntla nganiso yayiyinxalenye yokuxhamla nobudlelwane beentsapho kunye nomculi odumile.
UBaley wahlala kunye neNtsapho kwaze kwaba yilapho ukubulala yaba yingxenye ye-agenda kaManson. Emva kokubulawa kukaDonald "Ufutshane" uShaa Bailey washiya iqela waza kamva wangqina kubantu ngexesha lovavanyo lokubulala u-Hinman.
Iingcaphuno ezivela kubungqina bakhe:
"Yena (uCharles Manson) wathi unamazwi kunye noMnu Hinman, kwaye babe neengxabano ezifuthekileyo, kwaye kwafuneka ukuba kuthulise uGary Hinman phantsi, kwaye wathi wayesebenzisa ikrele waza wamnquma uGary Hinman yakhe washiya indlebe ukuya kwintsana yakhe.
"Wathetha nokuthi wayethulise uGary, kunye namantombazana abeka uGary embhedeni, kwaye uMnu Hinman wacela umthandazo wakhe kwaye emva koko wathi wayeshiyile uBobby ukuba aqede.
"Uthe iibhentshi ezimbini okanye ezintathu zaxoshwa endlwini. Uthi uBobby wayeyisidenge ukuba uSaradie abe nesibhamu kuMnu Hinman.
"Wathi yonke into ababeyifumene ukuya endlwini kaGary yayiyizithuthi zombini kunye ne-$ 27."
Kukho okungaziwa namhlanje.
UStegan Grogan wagwetywa waza wagwetywa ngo-1971 ngenxa yokuthatha inxaxheba ekubulaweni kwesandla sikaShahnhn ngesandla, uDonald "Ufutshane" uShea. Isigwebo sakhe sokufa saguqulelwa ebomini xa umgwebi uJames Kolts wagqiba iGrogan "uyisiphukuphuku kwaye uyagqithisa izidakamizwa ukuba zenze isigqibo."
UGrogan, owajoyina intsapho eneminyaka engama-22 ubudala, wayekho esikolweni esiphakamileyo kwaye wayejongwa ngamalungu entsapho njengelinye ixesha elimisiweyo. Wayengumculi omhle kodwa, kwaye kulula ukuyisebenzisa, iimpawu ezimbini ezenza ixabiso likaCharles Manson.
Entolongweni iGrogan ekugqibeleni wamlahla uManson waza wazisola ngenxa yezenzo zakhe ngelixa wayesemzini waseManson. Ngomnyaka we-1977 wanikela igunya kumaphu kwindawo eya kuyo umzimba kaShea. Ukuzisola kwakhe kunye nengxelo yakhe egciniweyo yeentolongo yamncedisa ngoNovemba ka-1985 waza wakhululwa entolongweni. Kulo suku, iGrogan yedwa ilungu lentsapho likaManson eligwetywe ngokubulala elikhutshiwe entolongweni.
Ukususela ekukhululweni kwakhe uye wagcina kude kwimidiya kwaye iindaba ezixhamlekileyo ngumgcini-mfanekiso wendlu ehlala eSan Francisco.
UCatherine Gillies, u-Cappy, wazalwa ngo-Agasti 1, 1950 waza wajoyina uMonkey Family ngo-1968. Kungekudala emva kokujoyina iqela elo lonke lafudukela kwisihlwama sika-grandgother e-Death Valley ehleli kufuphi neBarker Ranch. Ekugqibeleni intsapho yathatha ama-ranch ashicilelwe emva kokuhlaselwa kwamapolisa eBarker Ranch ngo-Oktobha 1969.
Kuthiwa uManson uthumele uGillies kunye namanye amalungu omndeni ukuba abulale ugogo wakhe ukuze athole ilifa elidala, kodwa umyalezo awuphumelelanga xa bephethe isondo elincinci.
Ngethuba lesigwebo sokubulala uTate noLaBianca, uGillies wathwesa ukuba uManson wayengenanto yokwenza nokubulala. Uthe ukunyaniseka kwangempela emva kokubulala kwakungenxa yokufumana uBobby Beausoleil entolongweni ngokwenza ukuba kubonakale ukuba u-Hinman wabulala kunye nokubulawa kukaTate noLaBianca babeshukunyiswa ngumbutho we-revolutionist omnyama. Kwakhona wathi ukubulawa akuzange kumcaphukise kwaye wazinikela ngokuzithandela ukuya, kodwa watshelwa ukuba akafunanga. Wavuma ukuba uya kubulala ukuze athole "umzalwana" ejele.
NgoNovemba 5, 1969, uGillies wayesendlwini yaseVenice xa umlandeli kaManson uJohn Haught "uZero" kuthiwa wazibulala ngexesha lomdlalo weRussia roulette.
Kuthiwa akakaze amgxeka ngokupheleleyo uManson kwaye emva kokuba usapho luqhekeke, wajoyina isiqhwenga semoto, washada, waqhawula kwaye wayenabantwana abane.
UJuan Flynn wayengumPanama, esebenza njenge-ranch ngesandla e-Spahn Ranch ngethuba leentsapho zaseManson zazihlala apho. Nangona engekho ilungu lentsapho, wachitha ixesha elininzi kunye neqela kwaye wathatha inxaxheba ekuguquleni iimoto ezibiwe kwiidune zegundane, ezaba ngumthombo wengeniso rhoqo kwintsapho. Ngokuphindaphindiweyo, uManson wayevame ukuvumela uFlynn ukuba alale ngesondo namanye amalungu entsapho.
Ngethuba lokubulawa kweTate noLaBianca, uFlynn wangqina ukuba uCharles Manson wayeyithembise kuye waza wavuma ukuba "wenza konke okubulalayo."
Umlandeli Omdala kunabo bonke uMans Catherine Ukwabelana ngeGypsy. Mugshot
Isabelo saqala ukwenza imisebenzi emincinci kumafilimu angaphantsi-bhajethi, ngokukodwa ama-movie ama-porn. Ngethuba lokutshintshana kwe-movie ye-porno, uRamrodder, wadibana noBobby Beausoleil kunye no-Share bathunywa noBobby nomkakhe. Kwakuye ngeli xesha wadibana noManson waza waba ngumlandeli osondeleyo kunye nelungu lentsapho.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1960, uPatricia "Katie" uKrenwinkel waba ilungu leentsapho ezidumileyo zeManson waza wabulala e-Tate-LaBianca ngokubulala ngo-1969. U-Krenwinkel kunye nabaxolisi, uCharles Manson, uSusan Atkins kunye noLeslie Van Houten batholakala benetyala baze bagwetywa ukufa ngo-Matshi 29, 1971 waza kamva wabuyela ejele entolongweni.
U Patricia Krenwinkel aka Katie
Ababulali uPatricia Krenwinkel aka Katie. Mugshot
UManson wakhetha amalungu athile amalungu entsapho ukuba aye kwiTate naseLaBianca amakhaya ukuba abulale. Ngokutsho kobubungqina obunikwe kamva kwimeko yokubulala, isicatshulwa sakhe malunga neKrenwinkel (uK Katie) ekwazi ukulawula ukubulala abantu abangenacala babesilungile.
Xa uhlaselo lwaqala kwi-Tate yokuhlala, iKrenwinkel walwa no-Abigail Folger, owayengumyeni, owayekwazi ukuphuma emanzini, kodwa waxoshwa waza wahlaselwa ngamaxesha amaninzi nguK Katie. U-Krenwinkel uthe uFolger wamncenga ukuba ayeke ngokuthi "ndifile kakade."
Ngexesha lokubulala amaLaBiancas, uKrenwinkel wahlasela uNkk LaBianca waza wamgwaza ngokuphindaphindiweyo. Wabe esewunamathele iforko yokudweba kwisisu sikaMnu. LaBianca kwaye wayiphonononga ukuze akwazi ukuyibukela.
Isenzo soSandla? U Patricia Krenwinkel - Isenzo Sesandla? Ifoto Yomntu
Lo mfanekiso uthathwe emva kokuba uKrenwinkel achithe iminyaka emibini entolongweni kwaye wayekade emgxeka uManson. Abanye bakholelwa, nangona kunjalo, kulo mfanekiso unikezela isenzo esicatshukileyo esifana nalabo abalandeli bakaManson ngaphandle kwendlu enkundleni esetyenziselwa ukubonisa ubumbano kunye nenhlonipho kumholi wabo owayo, uCharles Manson.
Katie Patricia Krenwinkel. Mugshot
U Patricia Krenwinkel wazihlukanisa noManson ngokukhawuleza ejele. Kulo lonke iqela, ubonakala enesidima kakhulu malunga nokuthatha inxaxheba kwakhe ekubulaweni. Ngomngxoxo owenziwa nguDiane Sawyer ngo-1994, uKrenwinkel wathi kuye, "Ndivusa imihla ngemihla ndiyazi ukuba ndiyindlalifa yento ebaluleke kakhulu, ebomi; kwaye ndenza oko kuba yiloo nto endikufaneleyo, ukuvuka rhoqo ekuseni kwaye uyazi. " Unqatshelwe i-parole izikhathi ezili-11 kwaye ukuva kwakhe okulandelayo ku-Julayi 2007.
ULarry Bailey (aka Larry Jones) waxhonywa nge-Spahn's Ranch kodwa akazange avunywe ngokupheleleyo nguManson ngenxa yobuso bakhe obumnyama. Ngokweengxelo, wayengumntu owanika uLinda Kasabian ummese ngokuhlwa kokubulawa kukaTate. Wayekhona xa uManson etshela uKasabian ukuba ahambe kunye noThony Watson kwikhaya laseTate aze enze nantoni na ayimxelela ukuba akwenze.
Emva kweendlela, uBaley wahlala echaphazelekayo kunye namanye amalungu enyameko kwaye wayethatha inxaxheba ekucebiseni iindlela zokufumana amalungu entsapho ejele.
Ngo-Oktobha 1969, umndeni kaManson wabanjwa ngenxa yokuba i-auto kunye ne-Squeaky yayingqamene nalo lonke iqela. Ngalesi sikhathi, amanye amalungu eqela aye athatha inxaxheba ekubulaleni kakubi emzini we-actress uSharon Tate kunye nokubulawa kwabantu abakwaLaBianca. I-Squeaky yayingenayo i-invole ngqo kumbulali kwaye yakhululwa entolongweni. NgoManson ejele, uSqueaky waba yinhloko yentsapho. Wahlala ezinikezele kuManson, ebhenca ibunzi lakhe nge "X". Kaninzi "
Umama uMary, uMary Manson uMary Brunner. Mugshot
UMary Brunner wayenomgangatho weBachelors eMbali kwiYunivesithi yaseWisconsin kwaye wayesebenza njengomthala weencwadi kwi-UC Berkeley xa wadibana noManson ngo-1967. Ubomi bukaBrunner buguqukile xa uManson eba yingxenye yalo. Wamkela umnqweno wokulala namanye amabhinqa, waqala ukwenza iziyobisi waza wabuyela emsebenzini wakhe waza waqala ukuhamba kunye neCalifornia. Wayekunceda ekukhohliseni abantu abadibana nabo ukuba bajoyine iMonkey Family.
Ngo-Epreli 1, 1968, uBrnner (oneminyaka engama-24) wazala unyana ka-Manson wesithathu, uValentine Michael Manson owathi wachaza umlingisi kwincwadi ethi Robert Heinlein ethi "Stranger kwiLizwe elinqabileyo." UBrunner, ngoku unina kumntwana kaManson, wakhula ngokunyanisekileyo kwimibono kaManson kunye noMoyeni okhulisa uManson.
NgoJulayi 27, ngo-1969, uBrunner wayekho xa uBobby Beausoleil egwaza waza wabulala uGary Hinman. Kamva wabanjwa ngenxa yokubandakanyeka kwakhe ekubulaleni, nangona kunjalo wafumana iminyango emva kokuvuma ukunikela ubungqina ngokushushisa.
Ukuzinikezela kwakhe kuManson wasala emva kokuvalelwa kwakhe ekubulaweni kweTate-LaBianca. Ngomhla ka-Agasti 21, 1971, kungekude emva kokuba uManson agwetyelwe, uMary kunye namanye amalungu angamalungu omndeni kaManson, athathe inxaxheba ekuphangi kwiSitolo saMazwe aseNtshona. Amapolisa awabamba ngesenzo emva kokutshintshiselwa kompu. Isicwangciso sokuphanga kwakukufumana izixhobo, ezingasetyenziselwa ukuphanga i-jet kwaye zibulale abagibeli ngeyure de amagosa akhululwe nguManson ejele. UBruner wagwetywa waza wathunyelwa kwiCalifornia Institute for Women kwaphela iminyaka engaphezu kweyesithandathu.
Kuthiwa emva kokukhululwa kwakhe wanqumla unxibelelwano noManson, watshintsha igama lakhe, waphinda wabuya wamkela unyana wakhe kwaye uhlala kwindawo ethile eMidwest.
USusan Bartrell wajoyina umndeni waseManson emva kokubulawa kukaTate-LaBianca, kodwa ngaphambi kokubanjwa kwimeko. Wabanjwa ngo-Oktobha 10, 1969 ukuhlaselwa kweBarker Ranch waza wakhululwa. Wayekho xa ilungu leentsapho uJohn Philip Haught (aka Zero) ekuthiwa wazibulala ngenkathi edlala iRussia roulette enebhasi egcweleyo. UBartrell wahlala kunye nosapho de ukuqala kwawo-1970.
akaCharles Watson. Mugshot
UWatson wahamba ekubeni "umfundi" kwisikolo sakhe esiphakeme saseTexas ukuba abe ngumyeni waseCharles Manson kunye nombulali obandayo. Wakhokelela ekubulaweni kwimizi yokuhlala yaseTate naseLaBianca kwaye wathatha inxaxheba ekubulaleni ilungu ngalinye lemizi yomibini. Ufunyaniswe enetyala lokubulala abantu abasixhenxe, uWatson uhlala ejele entolongweni, ungumfundisi ogqityiweyo, watshata kunye noyise wesithathu. Kaninzi "
Xa uneminyaka engama-22, ilungu lomndeni wakwaManson, uLeslie Van Houten, wathatha inxaxheba ekubulaweni kabuhlungu ngo-1969 kaLeon noRosemary LaBianca. Wayegwetywa ngamabini amabini okubulala nokuqala kunye nenani lokuceba ukubulala nokugweba ukufa. Ngenxa yesiphoso esilweni sakhe sokuqala, wanikwa isibini esasicatshulwa. Emva kokuchitha iinyanga ezintandathu ekhululekile ekugqibeleni, wabuyela enkundleni ngesithathu waza wagwetywa waza wagwetywa ubomi. Kaninzi "
aka Linda Christian, Yana the Witch, uLinda Chiochios uLinda Kasabian. Mugshot
Ngesinye isikhathi umlandeli kaManson, uKasabian wayekho ngexesha lokubulala noTeBianca kwaye wanikela ubungqina bobubungqina bentshutshiso ngexesha lovavanyo lokubulala. Ububungqina bakhe buyinto ebalulekileyo ekukholweni kukaCharles Manson, uCharles "Tex" Watson, uSusan Atkins, uPatricia Krenwinkel noLeslie Van Houten. Kaninzi "
UCharles Manson e-Age 74 uCharles Manson. Mug Shot 2009
UManson, oneminyaka engama-74, okwangoku ejele laseCorcoran e-Corcoran, malunga neekhilomitha ezili-150 ukusuka eLos Angeles. Le yekhefu yakhe yakutshanje yathathwa ngoMatshi 2009.
Reiki Hand Placements for Treatment Others
Indlela Yokuxelela Ukwahlukana Phakathi Kobuqhankqalaza Nenqindi